UPasuwa Wethula Uluhlu Lwabadlali Azakhetha Kubo Ukudlala leSwaziland
Umeqetshi weqembu elimela isizwe elamaWarriors, uKalisto Pasuwa
Ukaputeni weqembu leChicken Inn uDanny Phiri yena ongomunye wabadlali abasolelwa ukuba bebethengisa imidlalo akabizwanga kuluhlu lwabadlali olwethule ngumqeqetshi weqembu lesizwe uKalisto Pasuwa ngoLwesihlanu ekuseni.
Ukaputeni weqembu leChicken Inn, uDanny Phiri
Amahungahunga athi umfoka Phiri ucatshangelwa ndawonye lonozinti uWashington Arubi kodwa yena uArubi ubiziwe kuqembu lesizwe ndawonye lo Partson Jaure laye okuthiwa usolwa ukuba ulesandla ekuthengisweni kwemidlalo elizweni leSouth Africa lapho adlala khona.
Intathelizindaba esebenzela edolobheni lako Bulawayo uNation Ncube uthi yena uyakusola ukutshiywa kuka Phiri kubizwa laba abanye abadlali.
Abadlali ababizwe nguPasuwa ngabagoqela onozinti uTatenda Mukuruva, uWashington Arubi kanye lo Donovan Bernard.
Iqembu lenguqu elimela isizwe ele Zimbabwe Warriors
Imvimbi uPartson Jaure, uEric Chipeta, uCosta Nhamoinesu, uLawrence Mhlanga, uHardlife Zvirekwi, uBruce Kangwa, uOnesmo Bhasera, uElisha Muroiwa kanye labadlali abadlala eNgilandi uTendai Darikwa kanye lo Brendan Galloway.
Abadlali benkabeni yenkundla kulokaputeni uWillard Katsande, uMarvelous Nakamba, uRonald Chitiyo, uKuda Mahachi, uMarshal Mudehwe uTafadzwa Kutinyu kanye lo Macauley Bonne laye odlala eNgilandi.
Abagadli kulo Knowledge Musona, uNyasha Mushekwi, uCuthbert Malajila, uKhama Billiat, uEvans Rusike kanye lo Matthew Rusike.
Iqembu leZimbabwe lele Swaziland wona akusibaya sika Group L azadibana kumidlalo emibili sekusiya phela yonale inyanga njalo umdlalo wakuqala uzadlalelwa khonale eSwazini kuthi owesibili uzadlelelwa kwele Zimbabwe mhla zingamatshumi amabili lathoba munwe munye.
Iqembu lenguqu ele Highlanders lidibana leleDynamos
​Kolunye udaba olumayelana lomdlalo wenguqu iqembu le Highlanders lizemukela iqembu le Dynamos kuhlandla lakuqala ele final eyenkezo ye Bob 92 ngeSonto enkundleni ye Barbourfields.
Lumdlalo uqhutshwa kunanzwa ukufikisa kukaMongameli welizwe uRobert Gabriel Mugabe iminyaka engamatshumi ayithoba minwe mbili eyokuzalwa njalo ihlandla lesibili lizadlalelwa esigodlweni iHarare ngempelaviki ezayo.
Sikhangele umdlalo kakhilikithi:**************
Iqembu elimela ilizwe emdlalweni kakhilikithi ngoMgqibelo lizadibana leqembu leAfghanistan njalo elizanqoba lapho lizathola ilungelo lokudlulela phambili kumncintiswano wezizwe zomhlaba owe ICC Twenty20 World Cup.
Iqembu elimela isizwe emdlalweni kakhilikithi ele Zimbabwe-Cricket-team
Zombili iZimbabwe le Afghanistan sezinqobe kumidlalo emibili eziyidlale phambilini komdlalo wakusasa kusibaya sika Group B okutsho ukuba iqembu elizanqoba lapho yilo elizadlulela phambili kulumcintiswano ndawonye lelizanqoba kusibaya sika Group A.
Ezemidlalo lilo Joseph Njanji